भोली ३० गतेको भेलामा नयाँ शक्तिले २ करोड खर्च गर्ने, कहाँबाट आयो धेरै पैसा ? | Indrenionline.com
Home Feature Breaking news भोली ३० गतेको भेलामा नयाँ शक्तिले २ करोड खर्च गर्ने, कहाँबाट आयो...
भोली ३० गतेको भेलामा नयाँ शक्तिले २ करोड खर्च गर्ने, कहाँबाट आयो धेरै पैसा ?
२०७३ जेष्ठ २९ गते शनिबार ०१:२२ बजे
नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी स्थापना घोषणा सभामा दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। नयाँ शक्तिले घोषणासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको व्यवस्थापन, मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार गर्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले एमाओबादीबाट अलग भएर आठ महिनापछि पार्टी घोषणा गर्न लागेका हुन्।
पार्टी स्थापना सभालाई व्यवस्थित गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सभा व्यवस्थापना समिति र १४ वटा उपसमितिमार्फत गठन गरेर तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पार्टी घोषणा सभामा सहभागी हुनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि विभिन्न २६ देशका प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ।
एक संस्थापक ससदस्यहरुबाट १ सय ५ रुपैयाँको दरले १ करोड ५ लाख, अन्तरिम केन्द्रीय परिषदमा रहेका ४ सय ४९ बाट २२ लाख ४५ हजार, सचिवालय सदस्यमा रहेका ५१ जनाबाट ५ लाख १० हजार पार्टीभित्रबाटै संकलन हुने नयाँ शक्ति नेपालका सचिवालय सदस्य गंगा श्रेष्ठले बताए। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ।
Previous articleसवारी दुर्घटनामा २ को मत्यु, १ घाइते
Next articleदेउखुरीमा एक व्यक्तिले आफ्नै घरमा आगो झोसे